Paris St Germain oo ku dhawaaqday inay diyaar u tahay iibinta xiddigeeda Neymar Jr – Gool FM
(Paris) 09 Luulyo 2019. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Leonardo ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska France ka soo baxa ee “Le Parisien”, wuxuu si gaar ah kaga hadlay xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr.
Leonardo ayaa sheegay in Paris Saint-Germain ay diyaar u tahay iibinta Neymar Jr, balse shuruudu ay tahay in si ku haboon looga hishiiyo dhinacyada oo dhan.
Hadaba, Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Paris Saint-Germain oo ka hadlay arrinta ku saabsan Neymar Jr ayaa wuxuu yiri:
“Neymar Jr wuxuu ka tagi karaa Paris Saint-Germain hadii uu jiro dalab ku haboon, ciyaaryahanka ayaa la filayay inuu dib ugu soo laabto kooxda, balse ma uusan sameynin, waxaana ka wada hadli doonaa arrinta ku saabsan ciqaabta uu mri doono”.
“Ma aanan helin dalab rasmi ah ee ku aadan ciyaaryahanka, laakiin waxaan helnay xiriiro badan aan caadi aheyn, haa, oo ay qeyb ka tahay kooxda Barcelona”.
“PSG waxay ku tiirsanaan doontaa kaliya ciyaartoyda doonaya inay sii joogaan, ma garanayo xiliga uu Neymar dib ugu soo laabanayo kooxda, waxa kaliya ee aan ogahay ayaa ah inuusan halkan ku imaanin waqtiga loo qabtay”.
“Weli wuxuu heystaa heshiis seddex sano iyo bar ah ee ku sii heyn kara kooxda, maadaama aanan wali helin wax dalab ee rasmi ah, kama hadli karno wax walba ee ku saabsan kiiskan”.
Yeelkadeeda, Neymar Jr ayaan wali dib ugu soo laabanin tababarka PSG, iyadoo maamulka kooxda war rasmi ah ay arrintan kasoo saareen ku sheegeen, in xiddigan uu ku maqan yahay fasax la’aan isla markaana ay qaadi doonaan talaabada ku haboon ee dhankooda ah.
Carles Puyol oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Neymar Jr inuu dib ugu laabanayo Barcelona